Joe Biden ayaa loo dhaariyay xilka madaxweynaha Mareykanka, isagoo galay Aqalka Cad xilli kala qeybsanaan qoto dheer uu ka jiro dalkiisu.
Markii uu gacantiisa midig kor u qaaday, bidixdiisana saaray bible-ka, Biden waxaa loo dhaariyay xafiiska Arbacadii intii lagu guda jiray xaflad caleemo-saar ah oo aysan ka qaybgalin dad badan sababo la xiriira faafida covid-19.
“Tani waa maalintii Mareykanka. Tani waa maalinta dimuqraadiyadda. Maalin taariikhi ah iyo rajo, cusbooneysiin iyo xallin”ayuu yiri Biden.
Joe Biden waxaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynihii 46-aad ee Mareykanka iyadoo xaaskiisa Jill Biden ay hayso bible .“Maanta waxaan u dabaaldegeynaa guusha ee ma ahan musharrax, laakiin sabab – dabcan waa dimuqraadiyadda.”
Hogaamiye kuxigeenka Kamala Harris, haweeneydii ugu horeysay iyo qofkii ugu horeeyay oo madow ah ee qabta xilka, ayaa loo dhaariyay xilka wax yar ka hor Biden.
Kamala Harris waxaa loo dhaariyey madaxweyne kuxigeenka iyada oo ninkeeda Doug Emhoff uu kor ugu haayo bible-ka.
Caleemo ayaa dhacay iyada oo ay jirto walaac amni oo ka jira caasimada Mareykanka ka dib rabshado ay dad badani ku dhinteen 6dii Janaayo, markii taageerayaasha Trump ay weerareen dhismaha Capitol iyadoo Congress-ka ay ku shireen si ay u caddeeyaan guusha Biden ee doorashada.
Kumaan kun oo ciidamada amniga ah ayaa la geeyay, taas oo bixinaysa dareen la yaab leh,maadaama munaasabad dabaaldeg ah oo ay ku raaxaystaan kumanaan dad ah.
Tallaabo aad dhif u ah, Biden madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump wuxuu doortay inuusan ka qeybgalin xafladda.